တည်းဖြတ်သူ - Claudia Carletti Camponeschi - မြင့်မြတ်သောအိပ်မက်များ
Claudia Carletti Camponeschi သည်မီလန်တွင်အခြေစိုက်သည့် GIA အသုံးချရတနာလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမန်နေဂျာလည်းဖြစ်သည်။ သူသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားခြင်းနှင့်သူကြုံတွေ့ခဲ့သည့်ယဉ်ကျေးမှုများ၏ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များနှင့်အရသာအားလုံးကိုတန်ဖိုးထားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘ ၀ ၏ရှုထောင့်ကသူမသည်ကျောက်မျက်ရတနာများနှင့်အဆင့်မြင့်ရတနာများကိုအလွန်နှစ်သက်သောစိတ်ကိုမွေးမြူခဲ့ပြီးသူမ၏ရှုမြင်ပုံကိုကျယ်ပြန့်စေပြီးအလှအပ၊ ဟန်ချက်ညီမှု၊ ရဲရင့်သောဒီဇိုင်းများ၊
ရတနာရတနာအိပ်မက်မက် ကလောဒီယာ၏နှလုံးသားကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်မြန်ဆန်စေသည့်အရာများ၊ သူမ၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုဖမ်းယူနှိုးဆွခြင်း၊ သူမကိုပိုမိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အဘယ်အရာကိုရှာဖွေခြင်း၊ သူမအားပြောဆိုခြင်းမရှိခြင်းတို့ကိုကမ္ဘာသို့ဝေမျှရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မွေးဖွားခဲ့သည်။
၎င်းကိုဖြတ်ကျော်။ ရတနာ၏စိတ်နှင့်ကြည့်ရှုသူအကြားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တံတားတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ရတနာများကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ဒါကကျွန်မရဲ့မျှော်မှန်းချက်ပဲ
တစ်ခါတစ်ရံတွင်စာဖတ်သူကိုစကားပြောရန်၊ ဂလော်ဒီယာခံစားခဲ့ရသည့်တူညီသောစိတ်ခံစားမှုများ၊ အံ့သြဖွယ်ရာများနှင့်တူညီသောစိတ်ခံစားမှုများကိုရှာဖွေရန်စုဆောင်းခြင်းတစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်သမိုင်းအပိုင်းအစတစ်ခုသို့မဟုတ်အံ့ဖွယ်ဖန်တီးမှုတစ်ခုတည်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤအရာအားလုံးကိုနိုင်ငံတကာဒစ်ဂျစ်တယ်ဇိမ်ခံဘဝပုံစံမဂ္ဂဇင်း၏စာဖတ်သူများနှင့်လည်းမျှဝေသည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာအရသာစားပါကလောဒီယာသည်စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၅ မှ စ၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
A GIAAJP ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ ကလော်ဒီယာလည်းဖြစ်သည် ရတနာပံ့ပိုးသူ အီတလီမဂ္ဂဇင်းအတွက် Digest ကိုကြည့်ပါ, ရှိပါတယ် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလက်မှတ်ကိုကြည့်ပါကထုတ်ပေးသည် Fondation က de la Haute Horlogerie နှင့်ဇူလိုင်လ 2017 ကတည်းကသူမမှဘွဲ့ရရှိခဲ့သည် Il Sole 24 Ore စီးပွားရေးကျောင်း ထဲမှာ ဇိမ်ခံစီမံခန့်ခွဲမှု၏ Executive Master။ 2018 ခုနှစ်တွင်သူမလည်းလက်ခံရရှိခဲ့သည် ဇိမ်ခံကုမ္ပဏီများအတွက်ဒီဂျစ်တယ်နည်းဗျူဟာတွင်မဟာလက်မှတ် မှ Pambianco E-Academy.
မှတ်ချက်4ခုအယ်ဒီတာ"
မတ်လ 18, 2015
ချစ်ခင်ရပါသော Shachee၊ ဘယ်အလုပ်အမျိုးအစားကိုငါနဲ့အတူမျှဝေချင်ပါသလဲ။ ကြည့်ရှုရန် Instagram အကောင့်ရှိပါသလား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကလောဒီယာ
ငါ့ကို instagram မှာတွေ့နိုင်တယ်
Awesome! ငါတကယ်ကြိုက်တယ်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ငါ့ကိုဒီကုမ္ပဏီလိပ်စာကိုသင်၏ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ သင်၏ဇီဝဗေဒနှင့်မြင့်မားသောပုံများပို့ပေးပါ။ claudia@jewellerythroughtime.com
(မင်းရဲ့စာမျက်နှာကိုငါကြိုက်ပြီး Facebook ပေါ်မှာပုံတစ်ပုံမျှဝေပြီးပြီ။ အခု Instagram ကိုရှာတော့မယ်)